नातागोतालाई नभई समर्पितलाई अवसर दिनु पर्छः वृषेशचन्द्र लाल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल – doodhmati || dudhmati
Home / बातचित / नातागोतालाई नभई समर्पितलाई अवसर दिनु पर्छः वृषेशचन्द्र लाल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
Sujeet Jha February 1, 2018	बातचित 1,064 Views
प्र. राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा तपाई निर्विरोध निर्वाचित हुनु भयो कस्तो महशुश गरि रह्नु भएको छ ?
खुशी छु, खास गरेर निर्विरोध भएकोमा । हामी सबै मिलेर संघियतालाई संस्थागत गर्न तर्फ लाग्ने छौँ ।
प्र. एकताका तपाईको राजनीतिक कैरियर नै समाप्त भयो भन्ने भन्नेहरुको एक तप्का थिए तर यो जीतले तपाईले संजिवनी थपेको जस्तो लागि रहेको छ ?
मलाई लाग्दैन संविधानसभा एक र दूईमा मेरो भूमिका थियो । क्षमताको हिसावले कार्य पनि गरेर देखाए । मधेशको मुद्दा स्थापित गर्नमा क्षमता हिसावले कार्य गरेको छु, आन्दोलन संचालन गरेको छु, पार्टी एकिकरणमा मेरो पनि सहयोग रहेको छ । कैरियर समाप्त त्यो बेला हुन्छ जति बेला कुनै भूमिका नै हुँदैन । मेरो भूमिका त सबैमा थियो ।
हरेको कुरालाई जातियतासंग जोडेर कुरा गर्छन । यसले मधेश मुद्दा कमजोर हुन्छ । समर्पित व्यक्तिहरुलाई अवसर दिनु पर्छ, नातागोताको मान्छेलाई दिनुको कुनै औचित्य छैन । अहिलेको समयमा हामीलाई दूइटा मान्डेट दिइएको छ सुशासन र विकास त्यसका लागि कार्य गर्नु पर्छ ।
प्र. तपाईको कैरियर समाप्त पार्ने प्रयास भएकै हो ?
दुषित वातावरण यहाँ छ । साकारात्मक भन्दा नाकारात्मक कुरामा विश्वास गर्नेहरु धेरै छन । हरेको कुरालाई जातियतासंग जोडेर कुरा गर्छन । यसले मधेश मुद्दा कमजोर हुन्छ । समर्पित व्यक्तिहरुलाई अवसर दिनु पर्छ, नातागोताको मान्छेलाई दिनुको कुनै औचित्य छैन । अहिलेको समयमा हामीलाई दूइटा मान्डेट दिइएको छ सुशासन र विकास त्यसका लागि कार्य गर्नु पर्छ ।
संविधान संशोधन हुनै पर्छ । द्वन्द्वको समाप्तिका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई लागु गर्नु पर्छ । तर संविधान संशोधनका लागि एमाले र वामपंथी गठबन्धनको सहयोग आवश्यक रहेको छ । हुनत वामपन्थीहरुले पनि संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेका छन । तर के का लागि संशोधन त्यो स्पष्ट नभएर संशोधनमा समस्या देखिएको छ ।
प्र. संविधान संशोधनमा तपाई कतिको विश्वस्त हुनु हुन्छ ?
प्र. प्रदेशसभाको शपथ ग्रहणमा राजपा नेताद्वारा आफ्नो मातृभाषा छोडी हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्नु राजपाको रणनीति थियो वा अन्जानमा गलती भयो ?
यसलाई रणनीति नै भन्न सकिन्छ । हामीले मैथिली, भोजपुरीमा पनि शपथ लियौँ र हिन्दीमा पनि । हामी मातृभाषाको सम्मान गर्छौँ तर सम्पर्क भाषाको रुपमा हिन्दीलाई सम्मान गर्नु पर्छ । सम्पर्क भाषा हिन्दी नै राख्नु पर्छ ।
Tags राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर वृषेशचन्द्र लाल
Previous नयाँ दिल्ली भारतको सबैभन्दा प्रदूषित सहर
Next जनकपुर क्षेत्रको विकासमा लागि चिन सरकार सहयोग गर्न तैयार रहेको चिनका राजदूत यु हंगको घोषणा, कृषि उत्पादन बढाउन सल्लाह